Maalinta: Oktoobar 28, 2017
Qalabka gaadiidka baaskiilka ee basaska ee magaalada Bursa
BURULAŞ, oo sii wadaysa adeegyadeeda dhulka, badda iyo hawadda inta u dhaxaysa Bursa iyo Istanbul oo bixisa adeegyo gaadiid magaalada gudaheeda ah, waxay rakibaysaa qalabka xamuulka qaada ee baaskiillada gawaarida ku ordaya khadadka 1M iyo 2 GM. Baaskiilada isku laaban [More ...]
Mashruuca Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars wuxuu bilaabmayaa
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri, X Ka dib markii loo dabaaldegayay aasaaskii Jamhuuriyadda, 29 Oktoobar, oo hoos imaadnay madaxweynaha Madaxweynaheena, waxaan tegi doonaa maalinta xigta waxaanan bilaabi doonnaa tareenka rasmiga ah ee ugu horreeya ee ka socda Baku illaa Tbilisi-Kars. Xoreynta Kars [More ...]
Xoghayaha UDH Ahmet Arslan ee 29 Fariinta Maalinta Jamhuuriyadda October
Maanta, waxaan la kulannaa xiisaha farxadda leh ee u dabaaldegga sannad-guuradii saddexaad ee '94' ee ku dhawaaqidda Jamhuuriyaddayada oo leh farxad weyn iyo sharaf. Maanta, markii midnimadeenna shucuur muujiso xamaasad weyn, waxaan nahay qaran keliya, hal dowlad, hal calan, mid [More ...]
Shaqaalaha 55 Thousand 304 Shaqaalaha Waa In Lagu Qaadaa! Heerarka
Hay'adaha dowliga ah iyo ururada shaqaaleysiinaya shaqaaluhu waxay ku dhawaaqeen inay iyagu xil iska saari doonaan. Si kastaba ha noqotee, xayeysiiska wali lama daabicin, murashaxiinta ayaa ah kuwa samir badan. Qiimaynno muhiim ah ayaa laga sameeyay shaqo-helidda dadweynaha ee mas'uuliyiinta hay'adaha dowliga ah iyo ururada, [More ...]
25 kun magaalo oo magdhow ah oo loogu talogalay carruurta dhaawacmay ee maskaxda ka dhaawacan
Maxakamadda dastuuriga ah waxay ogaatay in ilmaha naafada ah ee maskaxda wax ka qaba ee si xun ugu dhaawacmay korantada hada maraya khadka fiilada korantada badan ee tareenka la jabiyey, iyo in xaquuqda nolosha iyo maxkamad macquul ah lagu xadgudbay. [More ...]
Rector of Anadolu University Dr. Naci Gündoğan wuxuu cadeeyay inaysan jirin wax dhibaato ah oo laxiriira Mashruuca Cilmi baarista iyo Imtixaanaadka Nidaamka Rareenka Wadooyinka Qaranka (URAYSİM), kaas oo dhismihiisu socdo lagana dooday dhawaan degmada Alpu. [More ...]
Nidaamka gaadiidka caalamiga ah ee gaadiidka tareenada ayaa bilaabay Esogü
Nidaamka Gawaarida Gawaarida Caalamiga ah ee Aqoon-isweydaarsiga (ERUSİS 2017) oo ay soo agaasimeen jaamacada Eskişehir Osmangazi iyo rugta injineeriyada korontada ee TMMOB (EMO) Eskişehir Laanta ayaa ka bilaabatay xarunta Kongareeska iyo Xarunta Dhaqanka. Dood-cilmiyeed laba maalmood ah [More ...]
29 Gaariga Gaadiidka Gaadiidka! Suuq-gareeysiinta oo la kordhiyay
Dawladda Hoose ee Magaalada, oo u qoondaysa qiimaha safarka dadweynaha sida kur 29 kuruş için oo loogu talagalay muwaadiniinta İzmir ee doonaya inay ka qeybqaataan howlaha Maalinta Jamhuriyadda 1ka Oktoobar, waxay dheereysteen saacadooda ilaa saqda dhexe. Barxadaha Cumhuriyet iyo Gündoğdu [More ...]
Maanta taariikhda: 28 Oktoobar 1961 Revolution-ka Cusub ee Eskisehir Tareenka X
Maanta oo ku taal Taariikhda 28 Oktoobar Mudnaanta 1890 ee Tesaloniki-Monastery Line waxaa la siiyay M.Alfred Kaulla, isagoo matalaya magaca koox Jarmal ah oo xiriir la leh Deutsch Bank. 28 October 1918 El Mazzre station ayaa laga daadgureeyay inta udhaxeysa Mebreke-tü'n-Naka. [More ...]